Immisa dayax ayuu Jupiter leeyahay: sifooyinka iyo samaynta | Shabakadda Saadaasha Hawada
Immisa dayax ayuu Jupiter leeyahay?
Jarmal Portillo | 23/06/2022 10:00 | Astronomy
Jupiter waa meeraha ugu weyn dhammaan nidaamka qoraxda wuxuuna ka tirsan yahay kooxda meerayaasha gaaska. Waa meere weyn oo ilaa hadda helay dayax tiro badan. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa la yaabay meeqa dayax ayaa jupiter leeyahay. Waxay leedahay tiro badan oo iyaga ka mid ah, samaynteeduna waa mid cajiib ah.
Sababtaas awgeed, waxaanu maqaalkan u hibeeyay inaanu kuu sheegno inta dayax ee Jupiter, sida ay u sameeyeen iyo qaar ka mid ah sifooyinka iyo xiisaha.
1 Immisa dayax ayuu Jupiter leeyahay?
2 Dayaxyada kale ee Jupiter
Cilmi-baaris dhowaan la sameeyay ayaa xaqiijisay in inta lagu jiro 2020 wadar ahaan 79 dayax ama dayax dabiici ah oo ku wareegaya Jupiter ayaa la tiriyay. Khubaradu waxa ay filayaan in tiradaasi ay korodho sanadka 2021-ka, maadaama la helay dayax cusub ilaa qarnigii 2020-aad. Haddii aad rabto in aad ogaato inta dayax ee Jupiter tan iyo 600, waxaad akhrin kartaa daraasadda Edward Ashton et al. Xaq u leh 1 XNUMX kilomitir dib u habeynta dayaxyada Jupiter-ka.
Dayaxyada Jupiter waxaa ka mid ah dayaxyada Galilean-ka. 4-da dayaxood ee wareegsan waxa daah furay 1610kii Galileo Galilei, oo u arkayay mid ka mid ah dayaxyada ugu waaweyn ee nidaamka qoraxda. Asal ahaan, Galileo waxa uu u kala magacaabay Jupiter 1, Jupiter 2, Jupiter 3, iyo Jupiter 4, iyaga oo u kala horraynaya meereyaasha. (gudaha ilaa dabe). Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda loo yaqaan magacyada Simon Marius uu markii dambe u soo jeediyay Jupiter's moon: Io, Europa, Ganymede, iyo Callisto.
Dayax-gacmeedyadan Galilean-ka ah ee hoos lagu tilmaamay waa dayaxyo joogto ah, taas oo ah, waxay ka samaysteen wareegyada meerayaasha, halkii loo qaban lahaa sidii dayax aan caadi ahayn.
Io, oo sidoo kale loo yaqaan Jupiter 1 ee sahamiyeyaashu, waa mid ka mid ah 4ta dayax ee Galileo, kan saddexaad ee ugu weyn uguna dhow Jupiter (dayaxa gudaha ugu hooseeya) oo ka weyn dayaxa Dhulka. Waxay leedahay dhexroor qiyaastii 3.643 kiiloomitir waxayna ku wareegtaa Jupiter 1,77 maalmood waxayna u jirtaa masaafo dhan 421.800 kiiloomitir. Dayaxani waxa uu leeyahay dhawr astaamood:
Marka hore, waxay leedahay in ka badan 400 foolkaanooyin firfircoon oo dusha sare ah iyo dhaqdhaqaaqa juquraafiga waa mid aad u weyn. kaas oo runtii ah kan ugu sarreeya nidaamka qoraxda oo dhan. Maxay tani ku saabsan tahay? Inta badan waxaa sabab u ah kulaylka bawdada oo ay ugu wacan tahay isqabqabsiga ka dhashay soo jiidashada u dhaxaysa Jupiter iyo dayaxyada kale ee waaweyn. Natiijadu waa tuubo foolkaanno ah oo awood u leh in ay gaadho dhererka xitaa in ka badan 500 kiiloomitir, iyada oo aan lahayn jeexjeexyo muuqda oo korka ah.
meesheeda waxa saameeya goobta magnetic Jupiter iyo u dhawaanshaha Io ee dayaxyada Galilean Europa iyo Ganymede.
Jawigeedu wuxuu ka kooban yahay sulfur dioxide (SO2).
Waxay leedahay cufnaan sare marka loo eego walxaha kale ee nidaamka qoraxda.
Ugu dambeyntii, waxay leedahay unugyo-biyoodyo ka yar kuwa kale ee bilaha kale.
Europe, ama Jupiter II, inkastoo uu yahay dayaxa ugu yar Galilean, oo leh dhexroorkiisu yahay 3.122 kilomitir, waa mid ka mid ah dayaxyada Jupiter ee xiisaha badan. Laakiin waa maxay sababta ay soo jiidasho leh? Dayaxu waxa uu si gaar ah u xiiseeyaa bahda cilmiga sayniska,sababta oo ah waxa in badan la islahaa in baraf aad u wayn oo 100 km ah hoostiisa uu yaalo badweyn oo xidhmaysa kulaylka ay dhaliyaan nuclei-ka oo ka samaysan nikkel iyo iron. , taas oo suurtagal ah nolosha. NASA waxay xaqiijisay 2016, iyo in kasta oo aysan wali jirin caddayn cilmi ah, waxaa jirta rajo ah in nolosha biyuhu ay ku horumari doonaan satalaytka.
Wax kale oo xusid mudan oo ku saabsan Europe ayaa ah in dayaxa, oo leh radius orbital of 671.100 kiiloomitir, uu ku soo laabto Jupiter 3,5 maalmood gudahood. Shilka juquraafiga ee in ka badan 100 mitir oo joog ah wuxuu muujinayaa in juquraafiga kore uu yar yahay. Marka laga soo tago, waxaa muhiim ah in la ogaado in jawigiisu ka kooban yahay ilaha abiotic ee ogsijiinta, iyo uumiga biyuhu waa sheyga isdhexgalka iftiinka ee dusha barafaysan.
Galileo waxa uu u bixiyay Ganymede ama Jupiter 3 waxa uuna ahaa dayaxa ugu wayn Galileo. Dhexroorkiisu yahay 5.262 kiiloomitir, Ganymede wuxuu ka sarreeyaa cabbirka Mercury, meeraha ugu dhow qorraxda, wuxuuna ku dhammeeyaa wareegga Jupiter oo dhan 1.070.400 kiiloomitir toddoba maalmood gudahood.
Dayax gacmeedkan ayaa leh astaamo badan oo ka duwan satalaytka kale kuwaas oo siinaya soo jiidashada gaarka ah:
Dhinaca kale, Dayaxa barafka silicate wuxuu leeyahay xudunta birta dareeraha ah iyo badweynta gudaha taas oo ay saynisyahannadu aaminsan yihiin in ay dhaafi karaan biyaha meeraheena.
Sidoo kale, waxa ay leedahay beer birlab ah oo u gaar ah, oo ka duwan kuwa kale, taas oo la aaminsan yahay in ay sabab u tahay convection ee xudunta dareere ah.
Marka laga soo tago inuu yahay kan ugu weyn, sidoo kale waa dayaxa Galili ee ugu dhalaalaya.
Callisto ama Jupiter IV sidoo kale waa dayax-gacmeed weyn, inkastoo cufan yar. Waxay leedahay dhexroor dhan 4.821 kilomitir waxayna ku wareegtaa 1.882.700 kiiloomitir Jupiter 17 maalmood gudahood. Dayaxani waa kan ugu hooseeya afarta, taas oo laga yaabo inay saameyn ku yeelato xaqiiqda ah in uu yahay midka ugu yar ee uu saameeyo magnetic field Jupiter.
Juquraafi ahaan marka loo hadlo, waxay u taagan tahay inay yeelato mid ka mid ah sagxadaha ugu da'da weyn oo leh jawi khafiif ah oo ka kooban ogsijiin iyo kaarboon laba ogsaydh. Xaaladdan oo kale, waxaa la rumeysan yahay in Callisto laga yaabo inay ku dhex jirto badweynta dhulka hoostiisa ee biyaha dareeraha ah.
Dayaxyada kale ee Jupiter
Jupiter's 79 dayax, kaliya 8 ayaa caadi ah. Marka laga soo tago 4-ta dayax-gacmeed ee Galilean-ka ah ee aan hore u soo sheegnay ayaa ku jira safka caadiga ah, waxaa jira 4 dayax-gacmeed oo Amalthea ah (Thebe, Amalthea, Adrastea iyo Metis). Dhammaantood waxay wadaagaan hal shay, oo ah inay yihiin dayaxyada ugu dhow Jupiter, waxay u wareegaan isla jihada, iyo inay leeyihiin u janjeera xagasha hoose.
Taas bedelkeeda, wareegyada dayaxa ee aan joogtada ahayn waa kuwa elliptical oo aad uga fog meeraha. Ka mid ah dayaxyada aan caadiga ahayn ee Jupiter waxaan ka heleynaa: kooxda Himalayan, Themisto, Carpo iyo Valetudo.
Sida aad arki karto, waxaan horay u ognahay inta dayax ee Jupiter iyo sifooyinka ugu muhiimsan ee mid kasta oo iyaga ka mid ah. Ahaanshaha meeraha weyn, waxay martigelin kartaa tiro badan oo iyaga ka mid ah. Saynis yahano badan ayaa rajo ka qaba in noloshu ay ku dhex kori karto. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto inta dayax ee Jupiter uu leeyahay iyo waxa ay yihiin astaamaha ugu muhiimsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Immisa dayax ayuu Jupiter leeyahay?
waa maxay saxaraha
Farqiga u dhexeeya magma iyo lava